100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games 1.6.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.6.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ဥာဏ္စမ္း 100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
100 အ pics ပဟေဠိမှန်းဆများအတွက်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး app ကိုပုံ, ဦးနှောက်ကြော်ငြာအတို, လိုဂို, trivia နှင့်ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ကပဟေဠိအထုပ်အပတ်တိုင်းဆက်ပြောသည်နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဟေဠိများနှင့်လိုဂိုပဟေဠိဂိမ်း app ကိုကမ်းလှမ်း:
●ကျော် 10000 ဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းဖို့
100 ကိုပဟေဠိအကြောင်းအရာများ, ခရီးသွားဂိမ်းနှင့်ရုပ်ပုံပဟေဠိဂိမ်းကျော်●
တမိသားစုလုံးအတွက်●ပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံးနှင့် trivia ဂိမ်း
on-the-go ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့်စိန်ခေါ်မှုများများအတွက် wifi မပါဘဲ●ခရီးသွားဂိမ်း
●လျော့နည်းသဲလွန်စကိုသုံးပါ = ပိုပြီးဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ပဟေဠိအထုပ်အနိုင်ရမည်ဟု!
app ကိုမှပြန်လာသောအခါ, ●တစ်ဦးအခမဲ့ပဟေဠိ pack ကိုနေ့စဉ် Get
●ဂရိတ်စကားလုံးဂိမ်းများ, ခရီးသွားဂိမ်း trivia ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, ပဟေဠိဂိမ်းများနှင့်ဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်။
တူသောလွယ်ကူသောပဟေဠိကဒ်အတွက်●အလေ့အကျင့်စာလုံးပေါင်းဘုံစကားများ '' တစ်ဦးအဘို့ဖြစ်၏ ... ''
● Friendly, ရယ်စရာစကားလုံးနှင့်ဓာတ်ပုံပဟေဠိဂိမ်း; အဆိုပါတိရစ္ဆာန်များ, ဂိမ်းများ, Sweet, Fairy Tales, အိမ်မွေး, အီမိုဂျီပေါ့ပ်နှင့်လိုဂိုဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့်ပိုပြီးပုံပါဘဲ။
100 အ pics ပဟေဠိအုပ်စုများပါဝင်သည်:
●စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကဲ့သို့ပင်? ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မှ Love '' အမှတ်တံဆိပ်ကြောင်းအမည်လား? '' ကျနော်တို့အခမဲ့ထည့်သွင်းတဦးတည်းအတူအမှတ်တံဆိပ်ပဟေဠိအထုပ်များ၏တန်ချိန်ရှိသည်!
●ပိုမိုသိရှိရန်ထိုကဲ့သို့သောစားနပ်ရိက္ခာ, အားလပ်ရက်, တေးဂီတအဖွဲ့များ, Candy, တီဗီပြရန်နှင့်ရုပ်ရှင်များ, ဂိမ်းရှိုးများ, နှင့်ပြင်သစ်အဖြစ်လိုဂို-based ပဟေဠိထုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲ!
●သင်ရုပ်ပြောင်-based ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိကိုချစ်သလား? ကျနော်တို့ကသူတို့ကို 100 ရဲ့ရှိသည်!
●ဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲအဆိုပါအီမိုဂျီ 1-5 pack မှာ, Movie, နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ပြောင်အခြေတည်!
ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့်စိန်ခေါ်မှုများများအတွက်စိတ်ဓါတ်များ၌အကြှနျုပျတို့၏အထူးရာသီအလိုက်အစုံနှင့်အတူအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး Get -
●ဆောင်းရာသီ, နွေဦးရာသီ, နွေရာသီ, Fall / ဆောင်းဦးရာသီ
တီဗီ, Movies & အနုပညာရှငျမြားနှငျ့
●, Movies ကြယ်ရုပ်ပုံပဟေဠိ pack ကို
ရရှိနိုင်●အတော်များများပိုပြီးရုပ်ပုံဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများနှင့်ဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်, ရုပ်ရှင်များ, Movie, သူရဲကောင်းများ, Movie, villain, Movie, သတ်မှတ်ပေးသည်နှင့် Quotes, တီဗီစတား, မင်းသမီးလေးများ, မင်းသားများ, အော်စကာဆုရ, အနုပညာရှငျမြားနှငျ့က Facebook profile များကိုနှင့်ဆပ်ပြာကြယ်။
●လုံလောက်အရသာရှိတဲ့ trivia နှင့်ရုပ်ပုံမြည်းစမ်းစာမေးပွဲ, စားနပ်ရိက္ခာဂေါ့, မုန့်ဖုတ်ပိတ်, အချိုပွဲ, Candy, ဟင်းချက်, Candy နှင့်အသီးများနှင့် Veg နှင့်အတူသင်၏နှုတ်ကိုရေလုပ် quizzes ...
** သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ dribble ဖို့မကြိုးစားပါ! **
သင်တစ်ဦးစကားလုံးဂိမ်းလိုလားသူဆိုရင်●, သင်ကစားပွဲအမှန်တကယ်စိန်ခေါ်မှုခန့်မှန်း 100 pics တွေ့ပါလိမ့်မယ်
set ● Awesome ကိုသမိုင်းအချက်အလက်များသမိုင်း၏နှစ်ပေါင်း 100 ကနေ 100 အထိဓါတ်ပုံတွေရှိပါတယ်!
●အသေးအဖွဲပန်ကာ? အောက်ပါကြိုးစားပါ: - သိပ္ပံ, အလံများ, သတင်းခေါင်းစီးသတင်း, အပင်, ကျောင်း, အဆိုပါကားများတွင်စာသား, အမေရိကန်, နိုင်ငံများ, အမေရိကန်စကားပြောပါ။
အမေရိကန်, ဗြိတိန်, အီတလီ, သြစတြေးလျ, ပြင်သစ်နှင့်ပိုပြီးတူသော●အဘယ်အရာကိုမှ Country ထုပ်
သံစဉ် & တေးဂီတ
●မေတ္တာကိုဂီတ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှော်ဂီတပဟေဠိများနှင့် trivia အထုပ်ရှာဖွေပါ။
●တေးဂီတကြယ်, Band ဂေါ့, တူရိယာ, အယ်လ်ဘမ်မျက်နှာဖုံးများ, သီချင်း, သီချင်းပဟေဠိ (အီမိုဂျီ) ပုံပါဘဲ။
●ဘောလုံးပရိသတ်တွေအဘို့ကြော့ကှငျးသို့ပြန်သွားရန်! ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ trivia ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ၏ 100s ရှိ
●ကစားသမားအပေါ်အတော်များများကသည်အခြားဘောလုံး-based ဂိမ်း (Legends), ဘောလုံးကလပ်အမှတ်တံဆိပ်များ, ဘောလုံးစကားစုများ။
● throwback ဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်နှင့် 70 ပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းဂိမ်းအများကြီး, 80s, 90, 00s, Retro ဂေါ့, ဂန္ထဝင်ရုပ်မြင်သံကြား, သမိုင်း, သတင်းခေါင်းစီးသတင်း, Shadows, Retro ကစားစရာ, ဟယ်လို & ခရစ္စမတ်။
●ဂန္ထဝင်ကစားစရာများနှင့်စပျစ်သီးကိုပရိတ်သတ်တွေများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ trivia အထုပ်!
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games အား အခ်က္ျပပါ
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း 100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.6.4.0
ထုတ်လုပ်သူ 100 PICS
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.poptacular.com
App Name: 100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games
လက်မှတ် SHA1: 7D:E6:D2:54:EE:2E:EC:14:AF:9A:E0:DC:AC:11:0E:B8:EB:37:7F:74
အဖွဲ့အစည်း (O): 100 Pics Ltd
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Greater London
100 PICS Quiz - Guess Trivia, Logo & Picture Games APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ